Ardaydii Jaamacadaha Oromia oo Tiradii u badnayd Todobaadkan xabsiyada isku waraysteen. | ogaden24
Ardaydii Jaamacadaha Oromia oo Tiradii u badnayd Todobaadkan xabsiyada isku waraysteen.
Warar kala duwan oo kasoo baxaya magaaloyinka dhulka Oromada ayaa sheegaya Hawlgalo is daba Jooga oo ciidamada Woyanuhu kuhayaan ardayda Jaamacadaha kuyaala deegaamada Oromada oo Woyanuhu aaminsan yahay inay saldhig u yihiin kacdoonka.
Maalin kahor ayay ciidanka wayaanuhu xabsiyada ka buuxiyeen arday aad ubadan oo wax kabaranaysay Jaamacada Ambo halkaas oo qalalaase oo Qalalaase xoogan uu kataagan yahay, sidoo kale ciidanka nabad sugida Woyanaha ayaa arday badan kala baxay Jaamacada Haramaayo 22-kii bishan, kuwaasi oo aan la ogayn halka ay ula kaceen.
Kooxda TPLF ayaa ardayda jaamacadaha ku eedaysay in ay qorshaynayaan dilal kadhan ah dadka maamulada kujira iyo ciidanka gumaysiga waxayna ardayda ku eedeeyeen in ay abaabulayaan banaan baxyada wadanka kasocda.
labo bari kahor ayay ahayd markay isku day dil kabadbaadeen Madaxa xisbi kusheega OPDO ee Dagmada Ambo iyo madaxa Jaamacada Ambo waxayna wayaanuhu dilkaas ku eedeeyeen ardayda Jaamacada Ambo.
Ardayda jaamacadaha Gobolka Oromia iyo dhalinta Oromada ayaa go’aansaday in ay shacabka Oromia ka dulqaadaan gumaysiga qoomiyada Tigreega ee mudada dheer dulsaaran shacabkooda,